Isiqophi imayelana ubuso nobuso ukuxhumana. Lutho engalingana ukukhulumisana komuntu siqu lapho ubuso nobuso contact kungenzeka. Kodwa nge umdlandla owaba khona ibhizinisi futhi global ekusebenzisaneni inthanethi, ukukhulumisana komuntu siqu akunakwenzeka ngakho ngaphandle kosizo amavidiyo abahlosiwe. amavidiyo Business lapho kuye kwakuthuthukisa ukuba izidingo ubuso nobuso ukuxhumana ezimweni eziningi, kodwa udinga ilungelo isiqophi amathuluzi ukuze zithole imiphumela enkulu.
Uma ibhizinisi - kungakhathaliseki umkhakha - udinga ekukhulumisaneni njalo abasebenzi ezingaba amakhasimende ukuze izinto uya kwesokudla. Imeyili ubelokhu esebenza kahle kakhulu okunokwethenjelwa mayelana nalokhu, kodwa breaking emingceleni ezintsha zokumaketha digital kwenze kube nesidingo izidingo zamavidiyo okufakayo. Lokhu uya ukubonisa ukuthi ngenkathi i-akhawunti yokumaketha ngqangi, kufanele buhambisane explainer amavidiyo imiphumela okubhekiswe.
Izinzuzo Ukusebenzisa Amavidiyo Your Business Izidingo
Wena kwezamabhizinisi ugqame futhi kuzuzwe iminqopho okubhekiswe. Ngakho eside wena Leveraging amandla nobuchwepheshe be-intanethi ukumaketha izixazululo zakho - udinga amavidiyo. Amavidiyo abamele akho digital nezisetshenziswa ukufinyelela futhi asekela amakhasimende akho. Kodwa ukuze uthole it right ukusuka ekuthomeni, kumele funda indlela ividiyo ingakusiza ivelele umkhakha wakho ukuze uthole impumela engcono.
Nazi ezinye izinzuzo for ukuthengisa amavidiyo kumelwe ucabangele namuhla -
Abantu baye babona futhi wezwa konke kulezi zinsuku - kodwa hhayi isiqophi okuqukethwe izinga. Abantu akusadingeki isikhathi sokufunda imibhalo eside futhi nzima emehlweni abo ezikrinini. Abantu kalula fed up nge-imeyili wokumaketha kulezi zinsuku ngenxa ezincwadini zabo eside emazombezombe - kodwa amavidiyo zihlukile okuningi. Abantu ukuxhuma manjalo ngohlelo amavidiyo ngenxa etimviwabukelwa / multimedia isikhalazo. Uma kumele bawine nokugxila nge imizamo yakho digital ukumaketha, khona-ke kumelwe acabange amavidiyo.
Win, Zibandakanye futhi Guqula imikhondo
ukuguqulwa Lead kuba lula lapho target izethameli bayakwazi ukuxhuma futhi bahlanganyele brand. Uzokwazi ukuthi iwine ukunakwa amakhasimende ezingase zivele, bahlanganyele okokufaka yabo futhi uguqule wabayisa amakhasimende abaqotho uma ungakwazi asizakale yamavidiyo. amavidiyo Marketing kukwenze siyasebenza kakhulu yokuxhuma, ukuxhumana kanye ukuguqulela imikhondo kalula - kungakhathaliseki isikhathi kanye nebanga. amakhasimende engaba khona manjalo baxhumane nawe uma bebona ubuso ngemuva sha ukukhuluma ngqo kubo. Imiqophi anika ibhizinisi lakho ubuso izwi ukuthi abantu bangayiqonda, uyakusiza ukuguqula ngaphandle kalula.
Khulisa Yokuqwashisa Brand futhi Yabelana Izindaba okuhehayo
Imiqophi ukuqinisekisa babuye bahlanganise imizamo yakho okuqukethwe ukumaketha by odala imiphumela kukalwa. Kukusiza ukuba uqobo ukwandisa ulwazi ngomkhiqizo ngokutshela umlayezo wakho ngqo. amavidiyo Marketing akuvumela ukwaba izindaba esiphoqayo ezisukunyiswe izethameli zakho uphinde ucingo esenzweni ngokushesha. Lapho lelitshe izilaleli uyaqonda ngalama ibhizinisi lakho nokuthi imithelela kubo, kwaba yilapho bashukunyiswa ukuthenga kuwe noma bahlanganyele nawe ngendlela nomvuzo.
Isiqophi Luhlanganisa nazo zonke iziteshi Digital Marketing
Enye yezinzuzo bevidiyo ukuthi kungaba ukuhlanganisa zonke iziteshi zokumaketha ukufinyelela izithameli zakho. Nge Ividiyo yokumaketha, ungakwazi ukufinyelela izithameli zakho phezu zokuxhumana, kumadivayisi eselula, amawebhusayithi interactive, imeyili kanye ngisho emabhodini digital. Iqiniso wukuthi kwenziwe umsebenzi othe xaxa ngo-umkhankaso wakho ukumaketha nge amavidiyo explainer kungakhathaliseki ukuthi izilaleli zakho yenzani noma bakuphi.
Imiqophi ibencono e izinjini
Kungani ucabanga amavidiyo we-YouTube ezidume ngakho futhi kuphumelele? Isizathu sisobala: abantu abathanda ukubuka amavidiyo ngoba interactive futhi zibandakanya ngqo. Leli qiniso dwebela imizamo yakho marketing isiqophi. Kodwa akupheleli lapho. Imiqophi lilinganise ephakeme e izinjini ngoba abantu bachithe isikhathi esiningi kuwebhusayithi yakho uma ubuka amavidiyo. Imiqophi ukusiza abantu ukuze uhlale futhi bahlanganyele eside ngewebhusayithi, okwenza izinjini gaba kusayithi lakho ephakeme ngenxa ukubandakanya abasebenzisi okungaphezulu. Cabanga ngalokhu: uvamise uchofoze okwengeziwe izihloko / izihloko ngokuqukethwe isiqophi kunabanye ngoba kungokwemvelo kakhulu ukwenza kanjalo.
Sekukonke, kumele funda indlela ividiyo ingakusiza ivelele umkhakha wakho ukuze uphumelele ngaso Ividiyo yokumaketha. Nalokhu, uzobe kakhulu ukwazi bebhrend ithemba, ukuguqula imikhondo, ngisho ukuthola izinga ukudluliselwa nge amavidiyo elula.
Wayekujabulela the post? Ngomusa sebenzisa izinkinobho ukwabelana kwesokunxele Uhlangothi ukwabelana post on zokuxhumana okuthandayo. Ukuze uqiniseke uhlale usesikhathini izihloko zethu, faka ikheli lakho ukuze ubhalisele.
2011/2012 English Premiership Club Owners and Net Worth
GUS8 Batch C: Olarewaju Alawoki Delivers the Unexpected
Kubiza malini ukwakha Adult Isiqophi Ayindingeko Iwebhusayithi
Accounts Copyright © 2018.